Tulips - elihle spring izimbali. A ezihlukahlukene elikhulu zinhlobo nezinhlobonhlobo zezitshalo kwenza eliyingqayizivele futhi enhle kokuvamile.
Tulips: ukunakekelwa kanye nokulungiselela inhlabathi
Lapho ukutshala izimbali izidingo ezikhethekile ze-inhlabathi alikho. Tulips ingaqala kunoma iyiphi inhlabathi engadini, kodwa ngaphezu kwakho konke bathanda a, kahle akhanywa, inhlabathi ngokulinganisela olumanzi okuxekethile. Lena loam kangcono noma supeschanik nge ukusabela kancane ane-alikhali noma hlangothi. Heavy ubumba nenhlabathi kumele kutsi tentiwe ncono ngokungeza Peat noma isihlabathi. Isayithi ye-izitshalo kufanele kukhethwe futhi bavikelekile isayithi umoya inala kwelanga. Kubalulekile ukuthi ukufika senziwa phansi ezingeni, singavumeli ukuwa wamanzi amile ezingaba cwilisa isibani ngibabuyisele ukubola. Indawo lokufikela Tulips kudingeka ukushintshwa kanye eminyakeni 4.
Tulips: ukunakekelwa kanye kokukhulelwa
Ngokuba ukuthuthukiswa izitshalo ukwenza phosphate futhi umanyolo umquba, ukukwenza ngesikhathi esifanayo njengoba yokumba. Nitrogen Umanyolo kumele wanezela nje ngaphambi kokwehla. Akunakwenzeka ngaphansi Tulips ukwenza umquba fresh, ngoba izimpande bayobola futhi bafe ama. Umquba kwanezelwa e inami elilandelayo ngayinye imitha skwele kokwehla: umquba noma umquba rotted kuthatha omunye ebhakedeni, ukhuni umlotha - 200 amagremu dolomite - iphawundi, 50 g we superphosphate double, 30 amagremu potassium sulfate kanye potassium nitrate, 25 amagremu - nitrogen umquba (ammonium nitrate noma urea). Uma yokumba akuyona eyenziwa ngokungeza Umanyolo ke ngokushesha ngaphambi kokutshala Tulips kudingeka wenze nitrophosphate noma namanye amaminerali ngesilinganiso 0,10 kg per imitha square.
Tulips: ukunakekelwa kanye boarding
Isikhathi esingcono kakhulu sokuba ukutshala ama in the band phakathi kuyinto maphakathi no-Autumn. Kusukela zokutshala, kufanele ubuyekeze ngokucophelela ama ususe wonke abolile. Ukuze lokhu kumele wasondela ngendlela efanele ukuvimbela ukusabalala kwezifo plant. Ngaphambi kokwehla ihora kufanele enze Etching ama in isixazululo ezibuthakathaka potassium permanganate. Kuhilela ukutshala Tulips entwasahlobo.
ama Okukhulu kufanele itshalwe 10 cm at ibanga kusuka komunye nomunye, kanye nebanga phakathi imigqa kufanele kube 25 cm, izingane ukubeka kakhulu ezishaywayo. Ukutshala ukujula ibalwa kusukela ubukhulu isibani. Ngakho on nenhlabathi ukukhanya ungqimba ebusweni kumele kutsho ukuphakama ama ezintathu, esindayo - amabili. Itulo emva kokutshala engcono fafaza namahlamvu omile noma Peat ungqimba ngamasentimitha amahlanu awugqinsi.
Tulips: Ukunakekela kanye nokuncelisa
Yamila kahle, zidinga ukunakekelwa elula. Sengikhathele isikhathi sabo Ukukhipha futhi ayakhala e nesomiso. Sikwazi ukukhula Izimbali ngaphandle yokondla entwasahlobo, kodwa isethulo zikamanyolo ezengeziwe eyayiyoholela yokuqhuma aluhlaza futhi yakha ama emikhulu. Okuhle kunakho konke ukuthi izitshalo ukuncela umquba, okuyinto ziyoncibilika emanzini.
I yokudla lokuqala wenziwa ngokushesha emva iqhwa Incibilikile. Umanyolo kufanele libe nitrogen, phosphorus kanye potassium isilinganiso 2: 2: 1 ngokulandelana. A sigqoka yesibili phezulu wenziwa ngesikhathi kumiswa efihlekile, kulesi simo ukuthatha kwenye ingxenye izingxenye ngenhla.
Buciko ukusika izimbali phezu stem kufanele kwesokunxele izingqimba okungenani ezimbili. Uma ahlabayo is hhayi lwenziwa, kubalulekile ukususa esibelethweni kwakhiwa emva amacembe bawe.
Tulips: Ukunakekela kanye nokugcina impahla
ama Tulip bembe njalo ngonyaka. Lokhu ngokuvamile kwenziwa phakathi ehlobo, lapho amaqabunga uqale yellowing. Tulips, izinhlobo okuyinto zihlelwe eceleni sibekwa izindawo ukubopha for omiswe, ngemva kwalokho okuseleyo kuhlanzwe isibani izimpande ubudala futhi izikali. Elondolozwe zokutshala ku-20 ° egumbini umoya.
Golden currant - berry ewusizo
Ngukuqhuma le ingemuva: ukwelashwa, izimpawu, izimbangela, zokuvimbela